NOOCYADA ASPEN LEH SAWIR IYO SHARAXAAD - MUSHROOMS
Wakiilada caadiga ah ee haweenka udgoon leh sharaxaad
Boqoshaada Aspen - nooc ka mid ah boqoshaada la cuni karo leh lugta qaro weyn iyo dabool cufan. Wakiilo ka socda duurjoogta ayaa ku kora kaymaha Eurasia iyo Waqooyiga Ameerika. Sababtoo ah xaqiiqda ah in mid ka mid ah noocyada of fangas this waa mid sun ah, dad yar oo kala saaro iyaga u dhexeeya. Aan aragno noocyada noocyada cawska iyo nooca ay yihiin.
Kabaha dufanka cas waxay leedahay koofiyad weyn (ilaa 20 cm). Koofiyadu waxay leedahay qaab muuqaal ah oo si fudud looga soocayo lugta. Maqaarka saafiga ah looma saari karo lakabkan, sida farduhu. Xilliga hawada qoyan, maqaarku wuxuu noqon karaa mid yar, laakiin marar badan waxaa laga heli karaa qalalan.
Baro sida loo kala soocayo boqoshaada la cuni karo, laanqayrta, bovin, boqoshaada caanaha madow, Russula oo ka soo jeeda khatarta khatarta ah.
Midabada ka mid ah cap ee boqoshaada cas cas dhacdaa sida noocyo kala duwan:
casaan iyo huruud;
Midabkeedu wuxuu si toos ah ugu tiirsan yahay bey'adda kalluunkaasi kordhay. Tusaale ahaan, haddii laysku daro midabka xiga ee xayndaabyada, midabka midabkiisu wuxuu ka badan yahay midab casaan ah. Haddii ay ku korto kaynta asli uduban, midabkiisu waa guduud mugdi ah. Wakiilo ka socda kaymaha isku dhafan waxay caadi ahaan leeyihiin midab casaan ama casaan. Waxaad la kulmi kartaa noocyada guduudan ee kaymaha laga bilaabo Juun ilaa Oktoobar.
Ma taqaanaa? Boqolleyda Aspen waxay leeyihiin waxyaabo sarreeya oo ah astaamaha asaasiga ah ee asaasiga ah, taas oo ah sababta ay watta ay u dhigantaa qiimaha hilibka.
Lugta fangaska caadi ahaan waxay leedahay qiyaasta 15 × 2.5 cm, waa cufan, inta badanna waxay hoos u dhacdaa, mararka qaarkood waxay ku dhacdaa dhulka hoostiisa. Waxay leedahay midab madow, mararka qaarkood saldhigeedu wuxuu noqon karaa mid cagaaran. Jidhku wuxuu leeyahay cufnaanta sare, jidhka iyo cufnaanta, laakiin inta lagu jiro da'da tartiib tartiibku wuxuu noqonayaa mid jilicsan. Jeexiskiisu waa cadaan midab leh, ka dib marka la gooyo wax-soo-saarku si dhakhso ah ayuu u noqotaa buluug. Dhinaca hoose ee lugta ayaa sidoo kale laga yaabaa in ay noqoto mid yar oo buluug ah. Tilmaamaha mushaharka cas cas waxaa loo arkaa dhadhan fiican iyo caraf udgoon.
Dadka doomaha ah ee loo yaqaan 'red aspen pickers' waxay dooran karaan kaymaha cirridka ah iyo kuwa isku dhafan. Loogu doorbidaa geedo yar yar.
Sida lagu arki karo sawirka, noocyada caddaanka ah ee asalka aspen, sida casaan, wuxuu leeyahay dabool weyn (ilaa 20 cm) oo qaab-dhismeed ah. Marka la eego fangaskaan, midabka cad ee furka ayaa lagu tilmaamaa marka hore, inkasta oo mararka qaarkood laga yaabo in uu dhaco midab casaan, bunni ama buluug ah. Maqaarkiisu had iyo jeer waa qallalan yahay oo qaawan. Koofiyadu waxaa lagu qabtaa lugta sare, sidoo kale caddaan. Sida ay da'doodu tahay, miisaanka qafiifka ah ee ku yaalla waxay u rogi kartaa cawl ama buni. Jidhku waa caddaan midab leh, xoog leh, marka la googooyo marka hore midab buluug ah, ka dibna madow, oo lugta dib u rogaa.
Waxaad la kulmi kartaa boletus cad ee keynta qulqulaya, halkaas oo uu jiro qoyaan badan. Cimilada kaneecadu waxay ka dhacdaa cimilada cagaaran. Waxay badanaa ka koreysaa bilaha Juun ilaa Sebtembar.
Waa muhiim! Boqoshaada Asaasiga ah ee White waxay ku qoran yihiin Buugga Cas ee Ruush sida noocyo dhif ah. Fungus waxaa loo mamnuucay in la ururiyo dadweynaha degmada Leningrad.
Noocyada jaalaha ah ee caleenta ah ee cagaarka ah waxay u egtahay sida likaha ee sawirada buugaagta carruurta - lugta waa iftiin iyo koofiyadu waa mid aad u weyn, oo midabka dhalaalaya. Koofiyadu waxay ku kori kartaa ilaa 20 cm, waxay leedahay qalalan, waxoogaa yar maqaarka taabashada oo si fudud u taabto. Midabka maqaarka waa mid huruud ah-bunni ama orange-jaalle ah. Jidhkiisa waa cufan, caddaan midab leh, gooyaa wuxuu noqonayaa casaan, kadibna wuxuu noqdaa mid buluug ah, ka dibna wuxuu u jeedaa madow. Lugta, marka la gooyo, wuxuu helaa midab buluug-cagaaran. Cimilkiisu wuxuu gaarayaa 20 cm, dhumucdiisuna waa 5cm, lugta ayaa hoos u dhacda. Dusha ayaa lagu daboolayaa qiyaasta qaro weyn oo qoyan oo bunni ah iyo midab madow.
Mushta waxay ku noolyihiin bjørk, bjørk-aspen, geed, geedo xawaash ah. Waxaad ka heli kartaa caleemaha fern. Dalka Ruushka, wuxuu aad ugu badan yahay kan birta. Sida cawska oo dhan ah, boqoshaada jaalaha ah-brown waa dayrta. Laakiin mararka qaarkood waxaa laga heli karaa bartamaha xagaaga.
Ma taqaanaa? Aspen ayaa loo tixgeliyaa fangaska ugu badbaado badan, maadaama uusan haysan laba mataan.
Noocyada noocaan ah ee boqoshaada aspen way kala duwan tahay in uu asalkoodu yahay mid cad oo u dhow dusha sare, saldhiguna wuxuu leeyahay midab huruud ah. Lugta ayaa leh qaab cylindrical ah, koraya ilaa 10 cm oo dherer ah iyo illaa 2 cm width. Daaqkiisu waa mid xiisa leh, oo siman. Koofiyada noocan ah waa casaan, mararka qaar leh lilac iyo hooskii saytuunka. Waxa la dhejin karaa ama isku xiran yahay, gaaraya 10 cm dhexroor. Dusha sare ee maqaarku waa qalalan oo siman.
Baro qaababka geedaha caleenta caleenta, jajabyada, boletus, dhirta geedaha jiilaalka.
Fungus wuxuu ka yimid waqooyiga Ameerika iyo asal ahaan Asia. Waxay ku dhacdaa birta ama geedaha. Dalka Ruushka, wuxuu ku koraa oo keliya dhulka bariga Faro iyo Siberia Bariga.
Caleemaha laf-dhabarta ah ee la yiraahdo boletus waxaa badanaa la yiraahdaa madaxa gaduudka, sida geela kale. Mushinka Pine waxaa lagu kala soocay astaamaha dareeraha madow. Waxay ku kori kartaa ilaa 15 cm dhexroor, mararka qaarkoodna waa weyn. Maqaarku waa qalalan oo qallayl. Jidhku waa caddaan, cufan yahay, oo ma urin. Gooyadii, jidhku si dhakhso ah ayuu u beddelaa caddaan ilaa buluug, kadibna madow. Muuqaal muuqaal ah oo ka mid ah funguskaan waa in uu bedeli karo mid ka mid ah taabashada aadanaha, iyo ma aha oo kaliya ka soo jeexan.
Ma taqaanaa? Ka dib marka cudurada viral, maraq ka soo baxa boqoshaada aspen dib u soo celiyaa difaac wanaagsan. Waxay leedahay fitamiin badan iyo mareeyn oo jidhku u baahan yahay ka dib xanuun.
Leg Krasnogolovika dheer (ilaa 15 cm) iyo qaro (ilaa 5 cm). Midabka saldhigiisu waa cagaaran, saldhiguna sida caadiga ah ayuu u wareegayaa dhulka. Xakameynta waxaad ka heli kartaa qiyaasta dhererka culus ee bunni ah. Waxay ku nooshahay qulqulo iyo isku qasan. Mycorrhiza waxay si khaas ah u sameeyaan geed, marxalado adag - oo leh dhir. Wuxuu dareemaa wanaag fiican ee xayawaanka, sida badanaa laga helo shirkad isaga la leh.
Dhalinyarada, dhirta maqaarku waxay leedahay dabool xargo oo wareegsan lugta. Marka ay gaboobaan, furku wuxuu furmaa oo uu qaadaa qaab kale - barkin. Dhexdhexaadiyaha daboolka xayawaanka ku jira ayaa la mid ah kuwa kale kuwa kale - laga bilaabo 5 illaa 15 cm. Midabkani waa midab-cas. Xilliga cimilada qoyan, diirka daboolka ayaa laga yaabaa inuu jabiyo, iyo waqtiga intiisa kale waa jilicsanaan. Mushinka wuxuu leeyahay jinsi cad oo cufan oo cufan. Marka la gooyo, isbadalkiisa midabka - marka hore wuxuu noqdaa buluug-lilac, ka dibna madow.
Lugtu waxay leedahay dherer ah 15 cm, ballaadh ilaa 5 cm, wax yar ka yara hooseeya. On lugta lugaha cufan oo cufan ayaa la eegayaa.
Waa muhiim! Xaqiiqada ah in dhirta bologus perepaspel, koofiyaddiisu ay sheegi doonto - waxay noqoneysaa mid isku xiga. Musqulahaas lama wada baabi'in karo - borotiinka ay ka kooban tahay ma aha mid dheefshiidka.
Waxay ka koraan bartamaha xagaaga ilaa Sebtembar. Inta badan waxaa jira kooxo yaryar, oo ka baxsan geedkii.
Baro wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka boqoshaada, boqoshaada, boqoshaada, boqoshaada porcini.
Koofiyaddan oo ah wakiilkan caadiga ah ee noocyada maskaxda ayaa yeelan kara midabada sida:
guduud mugdi ah;
Maqaarka oo ah daboolka yar ee mushqusha ayaa ah mid caajis ah, qoyan oo qalalan, ka dibna wuxuu noqonayaa caan. Koofiyuhu wuxuu koraa illaa 15 cm dhexroor. Lugta ayaa leh qaab cylindrical ah, oo ah fangaska qaangaarka ah - ilaa 18 cm dhererka iyo illaa 5 cm oo dhumucdiis. Lugta yar ee musqusha ayaa lagu daboolaa miisaannada cad, ka dibna waxay bedeshaa midab-madow ama brown-caleemo.
Waxay leedahay cad, cufan iyo hilib doofaar. On gooyaa, waxay bedeshaa midab si casaan-guduud, u rogaya galay brown-cas iyo dhamaadka - si madow. Shimbiraha madow ee jilicsan ayaa koraan halkaasoo ay ku jiraan jilbaha. Waxay leeyihiin dhadhan wacan oo aan lahayn wax cadcad.
Daadi jilbijada-joodar leh, ama boletus, waxay ku koraan kaymaha iyo geedo geedo. Wuxuu jecel yahay inuu ku noolaado xaaskiisa, berry. Xilliga uu kobcayo waa laga bilaabo Juun ilaa Sebtembar. Qalabka midabkeedu yahay midab guduudan. Diirka diirka ka soo baxa ayaa inta badan ka soo baxa cidhifyada daboolka iyo lakabka hoostiisa hoostiisa hoostiisa. Cabbirta fangasku waa jaangooyo loogu talagalay kobcinta likaha: koofiyadu waa 5 illaa 15 cm, lugtu waa ilaa 15 cm oo dherer ah iyo ilaa 5cm width.
Waa muhiim! Ka hor inta aanad karsan cunin laga bilaabo boqolladyadan, waa inaad hubisaa in ay tahay cirrid. Haddii aysan jirin kalsooni cad oo ku saabsan dabeecadda fangas gaar ah noocyada noocan ah, waxaad u baahan tahay inaad iska tuurto.
Noocyada kala duwan ee boqoshaada udubka lihi waxay ka duwan yihiin midba midka kale ee midabka cidhibka iyo lugta, iyo sidoo kale deegaanka. Waxa ugu muhiimsan waa in meel kasta oo laga helo iyo midab kasta oo ay yihiin, waa la cuni karaa oo la kariyaa.